कृष्णहरिले रुँदै भने- नेपाल सरकार मूर्दावाद ! नेपाल सरकार चोर हो ! – JanaSanchar.com
कृष्णहरिले रुँदै भने- नेपाल सरकार मूर्दावाद ! नेपाल सरकार चोर हो !
संबाददाता : मोनिका गुरुङ	प्रकाशित मिति: (२०७३ कार्तिक १७, बुधबार) १८:१७
भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी नेपालको तीन दिने भ्रमणका लागि दिल्ली विमानस्थलबाट उड्ने तयारीमै थिए । उनी काठमाडौं ओर्लिइसकेकै थिएनन् । नयाँ बानेश्वर चोक र बबरमहलको बीचमा पर्ने बुद्धनगरभित्रबाट मोटरसाइकलमा सवार एक व्यक्ति अल्फाबिटा कम्प्लेक्स नजिकै पुगे । उनले मोटरसाइकलमा रगत बोक्न प्रयोग गरिने ‘मेडिकल बक्स’ बोकेका थिए ।
प्रहरी र कार्कीवीचको वादविवाद अनलाइनखबरले कैद गर्न लाग्दा कार्कीले हेलमेटको भाइजरले मुख छोप्दै भने, ‘मेरो बिरामी मर्न लागिसक्यो, फोटो नखिच्नुस् ।’
आजभन्दा ठीक एक वर्षअघि भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीले देश थिलथिलो बनेको थियो । सडक थियो, सवारी साधनहरु पनि थिए, तर इन्धनको अभावले गाडीहरु गुड्न सकेका थिएनन् । त्यो बेलामा पनि विरामी र तिनका आफन्तले यसैगरी आँसु बगाउनुपरेको थियो ।
गत वर्षको कात्तिक महिनामा इन्धन अभावमा एम्बुलेन्स चल्न नसक्दा राजधानीसँगै जोडिएको धादिङमा एकजनाको अकालमै मृत्यु भएको थियो । तर, यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो, एक बर्षअघि भारतले लगाएको नाकाबन्दीबाट औषधि अभाव, इन्धन अभावका कारण धेरैले यस्तो सास्ती कति खेपे कति ।
तर, राष्ट्रिय समस्या भएकाले त्यतिखेर त्यसको दोष सरकारमाथि परेन । भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दीका कारण समस्या भएको भन्दै सबैले त्यसैअनुसार सामना गर्दै चित्त बुझाए । तर, अहिले जनताले सरकारसँग चित्त बुझाउने ठाउँ देखेनन् ।
कार्की एक घण्टापछि रगत बोकेर जाँदा डाक्टरले ढीला गर्नुभयो, बचाउन सकिएन भन्ने जवाफ दिएको भए ? यसमा मुख्य दोषी को हुन्छ सरकार ?
(२०७३ कार्तिक १७, बुधबार) १८:१७ मा प्रकाशित